Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Android
2 Siyaabaha Delete fariimaha qoraalka ee Android Phone
Best 20 Adventure Games u Android
1-dii The World ayaa Data Recovery for Android casriga
Top 5 Samsung Video Players inaad barataa
Ma ogtahay Players Samsung Video? Halkan waxa ku jira ugu sareysa 5 Samsung video Players idiin! Read More >>
Transfer Xiriirada ka iPhone in Sony Xperia
Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Sony Xperia? Isku day inaad waxtar qalab kala iibsiga telefoonka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad samayn iibsiga xiriir ee 1 click. Read More >>
MobileTrans Wareejin karaa maqal iyo video files, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, sawirada, jadwalka, iyo faylasha kale oo ka mid ah qalabka kale ee dhowr daqiiqo gudahood Read More >>
Posted by Selena Lee | 10.10.2015
Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad hogaanka 6 barnaamijyadooda Tababaraha xogta Android oo aad si fudud u kala socon kartaa isticmaalka xogta ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Read More >>
Maqaalkani waxa uu barayaa 10 optimizers ugu wanaagsan ee android. Read More >>
Laga soo bilaabo ugaarsadaha file junk in khasnado nadiifsan, waxaa jira 10 ugu wanaagsan oo xoojin ah qalab Android aad isticmaali karto si loo hagaajiyo wax-qabadka habka ee. Read More >>
Weli doonayo si loo hagaagsan Gmail xiriirada si Android? U deji. Halkan waa xal sahlan aad u. Read More >>
Way fududahay in la wadaagaan screen Android. Iyadoo tababaraha this Android, aad qabsadaan karo iyo wadaagaan screen Android si xor ah. Read More >>
Dareen waali ah oo ku saabsan Android socda gaabis ah? Isdeji. Waxaa tahay 5 talooyin si loo dedejiyo telefoonka Android ama kiniin. Read More >>
Wan loo diro loona helo fariimaha qoraalka ah ka computer? Waa quruxsan fudud. Maqaalkani waxa aad bixisaa Tababaraha sahlan in la isticmaalo Android, kaas oo kaa caawinaysaa in aad si fudud u samayn. Read More >>
Si fudud Import Vcard (.vcf) si ay Android
In this article waxaan soo bandhigo codsi waxtar leh MobileGo, taas oo ka dhigi VCF in Android darn fudud. Read More >>
Sidee baad u content ka aalad Android wareejiyo HTC, iyo qeybsanaan? Halkan waxaa ku qoran nasteexooyin waxtar leh. Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Android inay Computer
Haddii aad rabto in aad sawiro ka Android wareejiyo computer, waxaad tagi kartaa iyada oo qodobkan. Waxa aad bixisaa laba siyaabood si ay u dhammeystiraan. Read More >>
Posted by Thomas Jones | 24.09.2015
Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka Computer si ay Android
Maqaalkani waxa uu inta badan waxay kuu sheegaysaa sida loo sawiro ka computer wareejiyo Android in hab fudud. Hadda, tag dhex. Read More >>
Sida loo Xiriirada Android kaabta in Gmail
Sida loo raad raac xiriirada ka Android inay Gmail? Maqaalkani waxa uu ku siinayaa hab. Haddii aad xiisaynayso waxa ku jira, u akhri. Read More >>
Transfer WiFi File Android: Saxiixa Android Files wirelessly
Maqaalkani waxa uu ku siinayaa barnaamij si sahlan loo isticmaalo, kaas oo awood kuu inay sameeyaan kala iibsiga Android file WiFi si fudud. Read More >>
Read tutorial iyo doorato habka ugu fiican si loogu badalo wmv in Android, oo wuxuu ku raaxaysan inuu u ciyaaro wmv telefoonka aad Android meel kasta. Read More >>
Habka ugu fiican in ay tirtirto taariikhda dhirta iyo taariikhda Google search
Browser internet ayaa haya oo dhan internetka ee aad booqato lagu jiro daalacanaya. Waxaa jira sababo kala duwan oo laga yaabo in aad u horseedi in ay tirtirto taariikhda ee kombiyuutarka. Read More >>
5 Android App inuu kaa caawiyo inaad ka soo kabsado files tirtiray
Android ayaa galisay isgaarsiinta mobile siiyey in ay caan ah ayaa si wayn u kacay sidii mid ka mid ah nidaamka qalliinka waaweyn ee telefoonada badan smart maanta. Read More >>
Sida loo ka qalab kasta oo saar Google Chrome
In si weyn loo isticmaalo iyo mahadiyo inta badan dadka dunida oo dhan, Google Chrome waxaa laga heli karaa ku rakiban ee ku dhow kasta qalab Android ama aan Android. On hindisooyin badan Read More >>
<Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next